iPhone 12: tsaho, fanombohana ary izay rehetra fantatsika - iPhone News | Vaovao IPhone
El iPhone 12, iPhone 12 Pro ary iPhone 12 Pro Max hamely ny tsena raha tsy misy fanovana lehibe eo amin'ny ambaratonga famolavolana afa-tsy ny fanarenana ny sisin'ny iPhone 5 sy fakantsary fahefatra. Ho fanampin'izay, izy ity dia hampiditra voalohany manohana 5G hifanaraka amin'ny fandrosoana farany amin'ny fifandraisana Internet.
iPhone 12: daty famoahana sy vidiny
Na dia tsy nanambara ny fandefasana aza i Apple raha tsy fotoana fohy talohan'ny hetsika fampisehoana, nandritra ny taona maro ny fampisehoana ofisialy azy dia tamin'ny septambra isan-taona, manokana amin'ny herinandro faharoa, ka azo inoana fa amin'ity taona ity dia haverina io daty io ihany.
Tokony hotadidintsika fa ny coronavirus dia mety hisy fiantraikany amin'ny famokarana sy ny fampisehoana ny iPhone 12, na dia heverina ho kely aza ny fiatraikany. Mikasika ny daty famoahana azy dia tsy misy fiovana lehibe antenaina raha ny loharanom-baovao DigiTimes.
Ny habeny dia tombanana hitazona ao amin'ny 6,1 santimetatra fa miaraka amin'ny fanovana ny LCD ho any OLED, izay hampiakatra ny tahan'ny fanavaozana hatramin'ny 60Hz ka hatramin'ny 90Hz hanana fisehosehoana misimisy kokoa.
Raha dinihina ny vidin'ny maodely teo aloha sy ny làlan-kaleha izay mety hakana an'ity modely vaovao ity, ny iPhone 12 dia mety mihoatra ny vidin'ny 799 € ho an'ny maodely fototra indrindra, 1.000 € ho an'ny iPhone 12 Pro y 1.200 € ho an'ny iPhone 12 Pro Max. Antenaina ho lafo kokoa noho ny teo aloha ireo fitaovana ireo, noho izany ny vidiny ambony vaovao.
Modely hafa mora vidy no nandrasana talohan'izay: ny iPhone 9 na SE 2. Antenaina haseho amin'ny volana martsa na aprily 2020.
IPhone 12 famolavolana
Ny foto-kevitra farany miorina amin'ny fivoahana sy tsaho dia miloka fakantsary efatra fa tsy telo amin'ny maodely teo aloha, ary malama sisiny izany dia mampatsiahy antsika ny iPhone 5.
Mikasika ny fanamarihana, misy loharanom-baovao miloka amin'ny a fampihenana ny laharam-pahamehana ho takalon'ny fanaovana sorona Face ID. Na izany aza, milaza ny mpandinika hafa fa iray amin'ireo teknolojia mandroso tsara indrindra amin'ny orinasa izy ity ary tsy hamokatra raha tsy Touch ID fotsiny no ajanona.
Ity fakantsary fahaefatra ity dia tombantombana fa hanana marimarina kokoa amin'ny fandikana 3D ny zavatra, ilaina ho an'ny singa toy ny Virtual Reality.
Raha te hahalala ny minitra farany iPhone 12 ary ny tsaho sy fivoahana rehetra, azonao atao ny manohy mamaky ny vaovaony etsy ambany.
Araka ny efa fantatrao, ity dia iray amin'ireo fizarana tranonkala Apple izay tsidihiko tsindraindray amin'ny…
Fanamboarana programa ho an'ny iPhone 12 sy 12 Pro misy olana amin'ny feo
Ny orinasa Cupertino dia nanangana programa fanamboarana na fanoloana modely iPhone 12 sasany ary ...
Ny fivarotana ny iPhone 12 dia tsy niharan'ny fihenan'ny mahazatra talohan'ny nanombohan'ny iPhone 13
ny Ignatius Room hace 9 volana .
Ny telovolana fahatelo amin'ny taona ho an'ny Apple dia matetika tsy tsara amin'ny resaka fivarotana iPhone, satria ...
Fifanarahana amin'ny Apple Watch Series 6 GPS + Cellular ary vokatra Apple hafa
Noho ny fifanarahana nifanaovan'i Apple sy Amazon tamin'ny fivarotana mivantana ny vokatr'izy ireo tamin'ny alàlan'ny sehatra e-varotra ...
Ankehitriny ianao dia afaka mijanona amin'ny Apple Store ary maka MagSafe Battery Pack
Eny, efa misy bateria MagSafe ho an'ny iPhone 12 ao amin'ny tahiry ao amin'ny magazay Apple. Ka manana…
IPhone 12 dia mihena ambany noho ny iPhone 11
Fantatsika rehetra fa ny vokatra Apple dia mitazona ny lanjan'izy ireo eo amin'ny tsena rehefa ampiasaina amin'ny…
Bateria MagSafe vaovao manamafy ny iPhone 12 Manohana ny famerenana amin'ny laoniny Wireless
ny Karim Hmeidan hace 10 volana .
Ny iray amin'ireo lohahevitra tena nandrakofanay indrindra tamin'ny podcast-tsika isan-kerinandro dia ny tsaho milaza fa afaka mampiditra i Apple ...
Apple mandefa ny bateria MagSafe vaovao!
ny Jordi Gimenez hace 10 volana .
Ny orinasa Cupertino dia nanangana bateria MagSafe ho an'ny iPhone 12 izay manolotra ny fahafaham-po ...
ny Angel Gonzalez hace 11 volana .
Ny fandrosoana amin'ny fitaovana iPhone dia ahafahan'ny mpampiasa miaina fanatsarana bebe kokoa hatrany ...
Ny faritra iPhone 12 dia nihoatra ny 100 tapitrisa namidy
ny Ignatius Room hace 11 volana .
Ireo tovolahy avy ao amin'ny Counterpoint Research dia namoaka tatitra milaza fa efa nivarotra ny iPhone 12 ...
Apple dia mamoaka ny lisitry ny vokatra izay tsy tokony hanakaiky ny pacemaker
Tamin'ny fanombohana ny iPhone 12, maromaro ireo dokotera izay tsy nahita maso tsara ny fampiharana ny ...